Ogaden News Agency (ONA) – Hawl-wadeennada Ururka Haweenka Ogadeenya ee Norway oo shirkoodii 1aad isugu yimid Magaalada Oslo
Hawl-wadeennada Ururka Haweenka Ogadeenya ee Norway oo shirkoodii 1aad isugu yimid Magaalada Oslo
Posted by ONA Admin	/ January 30, 2012
Oslo, 29-Jan-2012- Waxaa kulan balaadhan isugu yimid xarunta Jaaliyadda Soomaalida Ogadeenya eeNorway, hawl-wadeenadda Ururka Haweenka Ogadeenya ee dalkaNorway.
Kulankan oo ahaa midkii kobaad ee ay yeeshaan hawl-wadeennada ururka haweenka Ogadeenya kadib markii si sharci ah looga diwaan-geliyey dalkaNorway, ayaa waxaa kulanka goob joog ka ahaa xubno katirsan maamulka Jaaliyadda oo ay hor kacayeen Gudoomiyaha iyo Xoghayaha JaaliyaddaNorway.
Shirka ay yeesheen hawl-wadeennada Ururka Haweenka Ogadeenya ee Norway gelinkii dambe ee maanta, ayaa looga wada hadlay arimo badan oo khuseeyey wax-qabadkii ururka haweenku sameeyeen sanadkii 2011 iyo kaalinta looga fadhiyo haweenka Soomaalida Ogadeenya kasoo jeeda inay ka soo dhalaalaan ee ah taageerada iyo xoogga looga baahan yahay inay ku garab-is-taagaan halganka shacabka Ogadeenya isaga xoreynayo gumeysiga Itobiya. Waxaana sidoo kale, hawl-wadeennada Ururka Haweenka Ogadeenya ay ku doorteen guddiga hagi-doonta ururka haweenka muddada soo socota.
Dood iyo falan-qeyn dheer kadib Waxay isku raaceen hawl-wadeennadu in la magacaabo hawl-wadeeno cusub oo ka midho-dhaliya ujeedooyinka iyo hindisayaasha loo asteeyey inuu gaadho Ururka Haweenka Ogadeenya muddada dhaw. Waxaana lagu doortay maamul ka kooban afar xubnood oo u dhigan sidan hoose ku qoran;
Marwo Hodan Abdullahi (Gudoomiye)
Marwo Muno Adan (Xoghaye)
Marwo Hani Biihi ( Abaabulka & Arim. Bulshadda)
Marwo Halimo Abdinour (Khasnaji)
Waxaa xusid mudan dadaalada aan kala go’a lahayn ee maalin iyo habeenba ay wadaan Maamulka iyo xubnaha Jaaliyada Soomaalida Ogadeenya ee wadanka Norway, dadaaladaas oo ku aadan saro u qaadista ka qeyb-gelinta dhamaan qeybaha uu ka kooban yahay Shacabka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda dalka Ogadeenya, hawlaha iyo barnaamijyada lagu horumarin hayo tayada iyo wax qabadka Jaaliyadda, iyo fulinta dhamaan qorsheyaasha u degsan Jaaliyadda Soomaalida Ogadeenya ee dalka Norway.
Kulankan ay yeesheen hawl-wadeenadda Ururka Haweenka Ogadeenya ee Norway ayaa yimid maalin kadib markii la soo gabo-gabeeyey shirweynihii Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadeenya (OYSU-Norway) oo isna shalay ka socday magaalada Oslo. Shirkaas oo lagaga wadahadlayey qorshe hawleedka ururka dhalinta ee 2012 (Action plan 2012) , kaas oo wax tar u lahaan doona dhalinyarada iyo ardayda Ogadeenya ee ku dhaqanNorway.